Nepal Samaya | जाजरकोटको दादुरा नियन्त्रणन्मुख : स्वास्थ्य मन्त्रालय
जाजरकोटको दादुरा नियन्त्रणन्मुख : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं- जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ मा देखिएको दादुरा नियन्त्रणन्मुख रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दादुराको संक्रमण देखिएको रावतगाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पठाएर जाँच सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले बताए।
उनले आफूलाई अवस्था नियन्त्रणउन्मुख रहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय खोप महाशाखाका निर्देशक सागर दाहालले जाजरकोटका विद्यालयमा गएर लक्षण देखिएका विद्यार्थीको पहिचान र परीक्षण सुरु गरिएको बताए।
अन्य विद्यार्थीलाई दादुराको संक्रमण भए–नभएका बारेमा जाँच गरिरहेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक दीपक ओलीले नेपाल समयलाई बताए। जाँचबाट थप दुई जनामा दादुरा संक्रमण भएको देखिएको उनले बताए।
हप्ता दिनअघि मात्र रावतगाउँका दुई बालबालिकाको नमुना संकलन गरी नेपालगञ्ज पठाइएकामा सो नमुनामा दादुरा भएको पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले सो रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ।
भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले रिपोर्ट दिन बाँकी रहेकाले थप जानकारी प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताए। ‘तर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था अहिले छैन। नियन्त्रणोन्मुख नै छ’, उनले भने।
नेपालले सन् २०१९ भित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर यो रोगको संक्रमणदर बढ्न थालेपछि उन्मूलन गर्ने लक्ष्य पनि पछि सर्दै गएको छ। सरकारको नयाँ रणनीति अनुसार सन् २०२३ सम्ममा नेपालबाट दादुरा उन्मूलन गरिनेछ।
प्रकाशित: September 15, 2021 | 10:55:53 काठमाडौं, बुधबार, भदौ ३०, २०७८
थप १४७६ मा कोरोना संक्रमण, ९ जनाको मृत्यु
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १४७६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। यस्तै ९ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
कारबाहीको फाइल दराजमा थन्क्याएर डा. पुकारचन्द्रलाई पुनः नियुक्ति
तर आफूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको फाइल हालसम्म पनि गुपचुप बनाउन डा. श्रेष्ठले ठूलो राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेका थिए।
गरिबी र कुपोषणको थप मारमा पर्दै नेपाली बालबालिका : युनिसेफ
कोरोना महामारीका कारण नेपालका बालबालिका थप कुपोषणको मारमा परेका छन्।
तीन जिल्लाको लक्षित जनसंख्याले पायो पूर्ण खोप
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप तीन जिल्लामा पूर्णमात्रामा लगाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मनाङ, मुस्ताङ र पूर्वरुकुममा सबै लक्षित जनसंख्यामा पूर्णमात्रामा खोप लगाएको जानकारी दिएका छन्।
कोभिड-१९ डेल्टा भेरियन्ट संक्रमितमा देखिने लक्षण परिवर्तन, कस्ता छन् नयाँ लक्षण ?
पछिल्लो समय गरिएको एक अध्ययन अनुसार डेल्टा भेरियन्ट संक्रमितमा देखिने लक्षणहरुमा परिवर्तन आएको पाइएको छ।
थप ५० करोड डोज फाइजर खोप अनुदान दिँदै अमेरिका
अमेरिकाले अनुदानमा दिइने खोपलाई आगामी जनवरीदेखि ढुवानी गर्न सुरु गर्नेछ। 'जनवरीदेखि अर्को वर्षको सेप्टेम्बरसम्ममा अमेरिकाले ८० करोड खोपहरू विश्वभर पठाउनेछ,' उनले भने।